लेकसाइडमा चल्ने रात्रिकालिन ब्यबसायले स्थानीयलाई तनाव : रातभर कोलाहलदेखि बाटोमै शारी*रीक स*म्बन्ध राखेकोसम्म दृश्य देखेपछि स्थानिय पुगे अदालत - पलपलका खबर
लेकसाइडमा चल्ने रात्रिकालिन ब्यबसायले स्थानीयलाई तनाव : रातभर कोलाहलदेखि बाटोमै शारी*रीक स*म्बन्ध राखेकोसम्म दृश्य देखेपछि स्थानिय पुगे अदालत
पोखरा, २८ साउन । पर्यटकीय नगरि पोखरा पछिल्लो समय विकृत बन्दै गएको छ । यहाँका सरोकारवालाहरुले पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका भए पनि त्यस्तो भएको छैन । बिशेष गरेर त्यहाँ गरिने रात्रीकालीन व्यवसायले स्थानीयबासीलाई हैरान बनाएको छ ।
लेकसाइडलाई २४ सै घण्टा खोल्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला पोखरामा सन्चालन भईरहेका डिस्कोथेक, डान्सबार र पवका कारण वातावरण अराजक बन्दै गएकोमा लेकसाइडवासीले गुनासो गरेका छन् । लेकसाइडबासीले गुनासो मात्र गरेका छैनन्, उनिहरुले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् ।
उनिहरुको भनाई छ – ‘रातभर सुत्न सकिँदैन । एक प्रहर निँदाउन खोज्यो, हरेक रात कोलाहल छ । बोत्तल हानाहान र केटी तानतान हुन्छ,’ उनिहरुको भनाई छ ‘यस्तो कहिलेसम्म ? चैनसँग सुत्न कहिले पाइन्छ ?’ अहिलेको युवापुस्ता बिग्रिँदै गएकोमा गुनासो समेत गरेका छन् ।
बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस्-
हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाकी एक सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी अस्पताल पु¥याइएको छ । चङ्खेली गाउँपालिका–३ की २२ वर्षीया कत्ती बुढाले सुत्केरी व्यथा लागेर चार दिनदेखि बच्चा जन्माउन नसकेपछि उपचारका लागि हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा हेलिकप्टरबाट लगिएको हो ।
महिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उनको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनिता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । बुढालाई जिल्ला अस्पताल पु¥याएसँगै त्यहाँका चिकित्सक सरो प्रजापति, जेष्ठ अनमी सरिता बोहरालगायतको टोलीले शिशु जन्माउन सहयोग पु¥याएको जेष्ठ अनमी बोहराले जानकारी दिनुभयो । अहिले आमा र शिुशु दुवैको अवस्था राम्रो भएको उहाँको भनाइ थियो । रासस
Previous Article सैनिक फौजसंग परेड खेल्न कश्मीर पुगेका क्रिकेटर धोनी जब भलिबल खेलेर बसे
Next Article रबी लामिछानेका समर्थकले आफ्नो फोटोमा ‘रिप’ भनेर कमेन्ट गरेपछि पत्रकार पबित्रा रुँदै आइन् मिडियामा, के हो त खास कुरो ? ( हेर्नुस् भिडियो)